China SEBIC Hery lehibe Lady Lady ebike factory sy mpanamboatra | Funncycle
Haben'ny kodiarana 28 ″
maotera Brushless, 36V 250W Motor any aoriana BAFANG
Laharana maodely BEF-RH28RF
filanjana 28 * 2.0 ″ firaka aliminioma 6061, lasina TIG
Fork Fampiatoana SUNTOUR 28 * 2.0 ″, firaka + firaka
kodiarana CST 28 * 2.0 ″ A / V Mainty
Ho an'ity maodely ity dia nampiditra kodiarana malefaka sy CST 28 izahay miaraka amina kodiarana milanja 2.0-inch, ka afaka mihodinkodina mora foana ny ankamaroan'ny triatra, fipoahana ary lavaka mba hiantohana fa tsy misy mijanona eo amin'ny lalanao mankany amin'ny fotoana mahafinaritra . Ary hialokaloka amin'ireo fisehoan-javatra vaovao rehetra ireo dia notondroinay niaraka tamin'ny singa izay azo antoka fa hitazona anao tsy hanana ahiahy mandritra ny fotoana maharitra. Midika izany fa ho hitanao ny singa Shimano 8 hafainganam-pandeha, ny freins hidina mahery vaika, ny racks, ny fenders ary ny jiro LED mamirapiratra eo anoloana sy aorian'ny bisikileta.
- Ny endriny alimina vita amin'ny aliminioma ao amin'ny Como dia mametraka ny batterie sy motera azy madio, ary mbola mitazona ireo fananana maivana maivana izay fantatra.
Izy io koa dia mifangaro tanteraka amin'ilay rafitra ary efa namboarina ho an'ny mitaingina tanàna. Izy io dia mamaly amin'ny fomba mahery ny herin'ny pedal anao, ka arakaraka ny itiavanao ny dianao, no vao mainka manome hery anao. Ary miaraka amina famolavolana fehikibo anatiny, manao izany izy raha tsy ampihorohoroina ho amin'ny diany malama sy mangina indrindra azo atao.
- Namboarinay ny batterie 36v 11.6AH fanao mba hampidirina tanteraka amin'ilay frame, azo esorina amin'ny famahana mora, ary azo hidiana mba hiarovana filaminana. Izy io dia mifampiresaka amin'ny fampirantiana ary manana maodely marobe mba hampitomboana ny fahombiazana sy ny joro ankapobeny. Ho an'ny tombana amin'ny laharam-pahamehana mifototra amin'ny karazana miovaova, azafady mba jereo ny Turbo Range Calculator anay.
Teo aloha: SEBIC futuristic city vaovao manandanja ebikes vaovao
Manaraka: SEBIC enduro afovoany mitaingina môtô lalana